Air Canada ayaa adeeg cusub oo aan joogsi lahayn ka bilaabaysa inta u dhexeysa Montreal iyo Kelowna
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Air Canada ayaa adeeg cusub oo aan joogsi lahayn ka bilaabaysa inta u dhexeysa Montreal iyo Kelowna
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Wadadan cusubi waxay kordhinaysaa saamaynta weyn ee ay Air Canada ku leedahay dhaqaalaha maxalliga ah iyo kan guud ahaan gobolka British Columbia.
Ilaa shan jeer duulimaadyo aan joogsi lahayn oo toddobaadle ah oo u dhexeeya Montreal iyo Kelowna.
Diyaaradda waxay iskuxidhaa Dooxada Okanagan ee BC iyada oo duulimaadyo aan joogsi lahayn kusocota dhamaan afarta xarumood ee Air Canada: Montreal, Toronto, Vancouver iyo Calgary.
Diyaaradda Air Canada ee shidaalka wax ku oolka ah ee Airbus A220-300 ayaa loo isticmaali doonaa wadada.
Wadadii ugu dambeysay ee Air Canada ay ku timaado oo ah adeegga kaliya ee aan joogsiga laheyn ee u dhexeeya Montreal iyo Kelowna ayaa maanta loogu dabaal degay Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee Kelowna. Duulimaadyadu waxay shaqeeyaan seddex jeer usbuucii, iyagoo kordhaya ilaa afar jeer bartamaha bisha July iyo shan jeer bisha Ogosto. Diyaaradda Air Canada ee shidaalka wax ku oolka ah ee Airbus A220-300 oo ay ku jiraan fasallada Ganacsiga iyo qolalka dhaqaalaha ayaa loo isticmaali doonaa wadada.
Wadadan cusubi waxay ku kordhinaysaa saamaynta weyn Air Canada wuxuu ku saabsan yahay dhaqaalaha maxalliga ah iyo kan gobolka British Columbia guud ahaan. Cudurka faafa ee 'COVID-19' kahor, Air Canada waxay ugu deeqday qiyaastii $ 2.2 bilyan dakhliga BC, sanadkii. Intaa waxaa sii dheer, Kelowna wuxuu hadda ku xiran yahay dhammaan afarta xarumood ee shirkadda duulimaadyada oo si toos ah ugu xidha Dooxada Okanagan shabakadda weyn ee Air Canada ee ugu badan, hal joogsi.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan bilowno adeegga kaliya ee aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya Montreal iyo Kelowna, annaga oo isku xireyna laba dalxiis oo dalxiis oo caan ah oo caan ku ah Quebecers iyo British Columbians si isku mid ah. Duulimaadyadeenna cusub ee saaran Air CanadaAirbus A220-300 'xasilloonida-jawiga-bey'adda leh ayaa sidoo kale si ku habboon waqtigiisa loogu xiraa isku xirnaanta Atlantic Canada iyo dibedda iyada oo loo sii marayo xarunteena Montreal. Maaddaama waddanku dib u furmayo, waxaan ku faraxsanahay inaan ka caawinno saaxiibbada iyo qoysaska inay midoobaan, oo aan taageerno soo kabashada dhaqaalaha iyo warshadaha dalxiiska ee Kanada. Waan ognahay inay dadku ku faraxsan yihiin inay mar kale safraan, waxaana rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno macaamiisheenna markabka, ”ayuu yiri Mark Galardo, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare, Qorshaynta Shabakadda iyo Maareynta Dakhliga ee Air Canada.
"Wadaageheena daacada ah Air Canada wuxuu mar kale cadeynayaa sida ay ugu qiimeeyaan rakaabkeena wadadan cusub ee Montreal-Kelowna," ayuu yiri Philippe Rainville, Madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee ADM. “Adeegii ka imanayay YUL Montréal-Trudeau Airport oo hadda yaraaday iyo xulashooyinka safarka oo wali xadidan, ku darista meeshan cusub ee fasaxa ah ee Kanada waxay imaanaysaa waqtiga saxda ah! Tani waxay fursad weyn u tahay reer Quebecers si ay u ogaadaan bilicda Galbeedka Kanada nabadgelyo buuxda, oo saaran diyaaradda cusub ee Airbus A220-300, kuwaas oo aad uga aamusan oo isugu soo ururay Mirabel (YMX), oo leh aqoon maxalli ah. Wax intaas ka badan ma dalban karno! ”
“Adeegga aan joogsiga lahayn ee Air Canada ee Montreal-Kelowna wuxuu astaan ​​weyn u yahay YLW si uu u keeno safarka u dhexeeya Quebec iyo gobolka Okanagan,” ayuu yiri Sam Samaddar, Agaasimaha Madaarka, YLW - Kelowna International Airport. “Montreal waxay ahayd gobol muhiim u ah dalxiiska Okanagan waxaan sanado badan ka shaqeynay sidii loo gaari lahaa isku xirnaanta bulshada. Waxaan rajeynayaa inaan ku soo dhoweeyo dadka deggan Quebec iyo kuwa ku xira Montreal ilaa janadeena afarta xilli. ”
Ellen Walker-Matthews, SR VP iyo Ku-simaha Madaxweynaha ahna Agaasimaha Guud ee Dalxiiska Thompson Okanagan ayaa yiri: "Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno duulimaadkan tooska ah ee tooska ah ee Montreal ee tagaya Kelowna oo furaya fursado aad u badan oo safar dalxiis ah oo ka dhaca Gobolka Thompson Okanagan. "Waxaan ogaanay baahida loo qabo kororka ee ka imanaya Quebec dhowrkii bilood ee la soo dhaafay iyada oo aan wax ka weydiinay safarka ganacsiga, warbaahinta safarka iyo shakhsiyaadka iyo adeeggan cusub ee tooska ah wuxuu gacan ka geysan doonaa qancinta iyo kobcinta dalabkan."
Air Canada Airbus A220-300 waxay leedahay 12 kuraasta Heerka Ganacsiga iyo 125 kuraasta Heerka Dhaqaalaha ah oo leh casriyeyn duulimaad diyaaradeed oo kursi kasta oo diyaaradda ah. Macaamiisha waxay leeyihiin boos shaqsiyadeed oo dheeri ah taas oo ay ugu wacan tahay kuraasta ugu ballaaran ee diyaaradaha, iyo tan ugu weyn ee qashinka lagu keydiyo ee diyaaraddan oo kale ah. Astaamaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah daaqado waaweyn iyo midab buuxa oo iftiin leh oo dabiici ah oo iftiiminaya niyadda taasoo gacan ka geysaneysa yareynta daalka marka aad safreyso Saqafyada dhaadheer, qolka garabka ee dheeriga ah iyo keydinta ayaa diyaaraddan ka dhigaya mid aan lala bar bar dhigi karin qaybta cidhiidhiga ah.
A220 waxay caawineysaa sii ballaarinta deegaanka hawada ee Canada ee qiiqa saafiga ah ee hawada marka la gaaro 2050 sababtoo ah matoorradeeda casriga ah ee loo yaqaan 'turbofan matoorrada' oo la saadaaliyay inay soo saari doonaan illaa 25 boqolkiiba dhimista isticmaalka shidaalka halkii kursi. A220 sidoo kale waa diyaaradda ugu xasilloon qaybteeda. Akhriso warqadda xaqiiqda ee Air Canada Airbus A220 wixii macluumaad dheeraad ah.
Dhamaan duulimaadyada Air Canada waxay bixiyaan kaydinta iyo furashada Aeroplan iyo, macaamiisha xaqa u leh, helitaanka adeegyada mudnaanta leh, Maple Leaf Lounges iyo faa'iidooyin kale.
F light R dibedda D cutubka
Time Dayuurad Maalinta Howlgalka
AC365 Montreal ilaa Kelowna 19: 05 21: 35 Airbus A220-300 Isniin, Khamiis, Jimco, Sabti, Sun
AC364 Kelowna ilaa Montreal 10: 00 17: 30 Airbus A220-300 Isniin, Talaado, Jimco, Sabti, Sun